ပူစီနံ ပင်စိမ်း တကီလာ – Margarita | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပူစီနံ ပင်စိမ်း တကီလာ – Margarita	18
Posted by ဇီဇီ on May 8, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., My Dear Diary | 18 comments
ဒီ တစ်ပတ် cocktail ကတော့ Tequila နဲ့ စပ်တဲ့ Margarita ကို ပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
၁) ဖန်ပုလင်းထဲ ကို ပင်စိမ်း ၅ ရွက်/ ပူစီနံ ၅ ညွန့် ထည့်. တကီလာ ၁ ခွက် ထည့် ပြီး ၁ ရက်လောက် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားး
၂) အနံ့ ပို ထွက်စေချင်ရင် ၁ရက်ကနေ ၁ ပတ် အထိ ထားလို့ ရသတဲ့.. ကိုယ်ကတော့ ၁ ရက်ပဲ…
၃) လိမ္မော်နဲ့ သံပုရာ ကို အရည်ညှစ်ပြီး သကြားနဲ့ ဖျော်ထားး
၄) သောက်မယ့် ဖန်ခွက် အဝကို သံပုရာသီးနဲ့ သုတ် ဆားပန်းကန်ထဲ မှောက်သုတ်ထားးး
၅) ရေခဲထည့်, တကီလာထည့်, လိမ္မော်သံပုရာရည် ထည့်ပြီးးရင် ပူစီနံ နဲ့ အလှဆင် သောက်လို့ ရပါပြီ…
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ပုစ်ိနံ ကြိုက်ဘူး
ခင်ဇော် says: ဈေးဝယ်လာတဲ့ သူက
ပင်စိမ်းမရလို့ မလေးဟင်းခတ်ရွက်တေ နဲ့ နံနံပင်တွေ ဝယ်လာလို့ နာ ရှင်ချင်သွားးတယ်…
ရွဲ့ပြီးး နံနံ ခတ်မလားးကြံသေးး နာ့ တကီလာ နှမြောလို့သာ….
ပူစီနံ မကြိုက်ရင် ပင်စိမ်းရွက်ထည့်ပြီးးပဲ လုပ်..
ရတယ်.. ပူစီနံ အရိုးးလေးးပဲ ထည့်ခိုင်းးတာ..
နာ က Mint ကြိုက်လို့ ရော ၁ ရက်ပဲ ထားးမှာမို့ရော မို့ အခိုင်လိုက်ထည့် လိုက်တာ..
မြစပဲရိုး says: ပြီးရင် အဲဒီ ကြောင်နံ ကို ကိုက်စားရမှာလား ဇီကလေးရ။ အပေါ်က မျောက်ကလေး အာ့အနီ က နာပေးတာဝုတ်ဘူး နော်။
အစ ကထဲ က နီ နေတာ။
ရွာထဲ လောလောဆယ် ဒီ နှစ်ယောက် ဘဲ ရှိတော့ နီ ဟာ နီ ဘဲ နီ လိုက်လေသလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ကျနော် တော့ ဝါးးစားးလိုက်တာပဲ အရီးးရေ..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကီလာ ဆိုတာ ဘာလဲဟင်
ခင်ဇော် says: ခညာာာာ
တကီလာ – Tequila အရက် ကိုပြောတာ အမဝင့်
ဦးကြောင်ကြီး says: ငမူးဂေါင်.. နင့်ကို ဝှီဂါဗလီစရာနဲ့တိုင်မယ်
ခင်ဇော် says: တိုင် တစ်လုံးး တစ်မတ်
Thint Aye Yeik says: မူးလားငင်
ခင်ဇော် says: မူးးလည်းးမူးးး
kai says: အဲဒီ Tequila အရက် မြန်မာပြည်မယ်… ဘယ်လောက်စစ်စစ်.. ပြင်းပြင်းထိရှိသလဲ..။
ဒီက မက်စ်စီကန်တွေသောက်တဲ့.. တကီလာမျိုးများရှိသလားလို့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အာ့တော့ ကျနော် မသိဗျ.. မနေ့ က ခွက်တဝက်စာ သောက်ပြီးး ပူတာမှ ချွေးတွေ က ရေချိုးထားသလို ထွက်တာာာာ..
အစစ် စစ်စစ် တော့ မသိ ဘူးး
Thint Aye Yeik says: အာမီရမ် တို့ ..မန္တလေးရမ် တို့… အဲ့လို ရမ် ဆိုတာတွေ သောက်ဖူးလား မမကြီး…
.ပြင်းလိုက်သမှ…။ သောက်ပြီးရင်… မမကြီး ပြောသလိုမျိုး.. ချွေးတွေ ရေချိုးသလို ထွက်…
ဆိုတော့… အဲ့ဒါနဲ့ လုပ်ရင်ကော…
ခင်ဇော် says: လာမယ်။
ရမ် နဲ့ လုပ်တဲ့ ကောက်တေးး
Wow says: ဟိုတလောက buy one get one ရလို့ အမုံးသွားဆွဲတာ အာ့ပေါ့
ခင်ဇော် says: ဖန်ခွက် ကို လှည့်သောက်နေရတာ မြင်တောင် မကောင်းးဘူးးး
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: အဟုတ် ဆားမပါရင် သောက်ရတာ တညိုးကြီးရယ်
သူတို့ခွက်မှာ သုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဆားကတစ်မျိုးလေး အပွင့်ခပ်ကြီးကြီးရယ်
ခင်ဇော် says: နာတော့ အိမ်သုံးဆားပဲ သုံးးတယ်..